टोन्सिलिटिस के हो? लक्षण र उपचारका लागि तपाईंको गाइड - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
कम्पनी, चेकआउट समुदाय, कल्याण औषधि जानकारी, समाचार समुदाय कम्पनी, समाचार घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य खेलहरु चेकआउट कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा मनोरञ्जन समाचार, कल्याण प्रेस औषधि जानकारी
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> टोन्सिलिटिस के हो? लक्षणहरू देख्न सिक्नुहोस्।
टोन्सिलिटिस के हो? लक्षणहरू देख्न सिक्नुहोस्।
जब तपाईंको शरीरमा केहि सही महसुस हुँदैन, तपाईं संभवतया सजग हुनुहुन्छ। हुनसक्छ तपाईको घाँटी दुखाइ रहेको छ र तपाईले आफ्नो लक्षणहरूलाई शान्त पार्न केही लz्जेन्ज खानुहुन्छ। वा सायद तपाईले केही आईबुप्रोफेन लिन सक्नुहुन्छ जुन टाउको दुखाईको साथ मद्दत गर्दछ। तर यसको मतलब के हो जब तपाईंसँग लक्षणहरूको क्लस्टर हुन्छ जुन खराब हुन्छ र तपाईंले सोच्नुहुन्छ भन्दा उनीहरू लामो समय सम्म रहन्छ (वा हुनुपर्दछ)? केहीको लागि, यसले टोन्सिलिटिसको केसलाई संकेत गर्न सक्दछ।
बिरामीहरूको एक श्रृंखला समावेश दुखेको घाँटी , भीडभाड, वा चिसो पनि। जान्नको लागि कि यदि यसले कोनेसलाईटिसले तपाइँको लक्षणहरूको कारण गराइरहेको छ भने, सब भन्दा साधारण संकेतकहरू र उनीहरूको उपचार सिक्न पढ्नुहोस्।
योजना बी गोली काम कहिले सम्म हुन्छ?
टोन्सिलिटिस के हो?
टन्सिलिटिस एक संक्रमण हो जसले टन्सिलको सूजन निम्त्याउँछ, टिश्युको दुई टुक्रा जो घाँटीको पछाडि स्थित छ। व्यक्तिले सामान्यतया लक्षणहरू अनुभव गर्दछ जुन सामान्य चिसो जस्तै सूजन लिम्फ नोड्स वा ज्वरो भन्दा बढी गम्भिर हुन्छ।
जबकि यो अवस्था सुरुमा एकदम गम्भीर लाग्न सक्छ, वास्तवमा, टोन्सिलिटिस एकदम साधारण बिरामी हो। यसले प्राय जसो बच्चाहरूलाई असर गर्दछ। यद्यपि केही वयस्कहरूले यस अवस्थाको अनुभव गर्न सक्दछन्, तर प्राय: गल्ती वा अन्य प्रकारको संक्रमणको लागि गल्ती हुन्छ। यदि उपचार नगरी छोडियो भने, टन्सिलिटिस चार र १ days दिनको बीचमा रहन्छ ।
के कारण टॉन्सिलाईटिस हुन्छ?
भाइरल वा ब्याक्टेरिया संक्रमणले टोन्सिललाई निम्त्याउन सक्छ।
टन्सिलिटिसको प्राय जसो केसहरू हुन्छन् भाइरल संक्रमण । धेरै भाइरसले टोन्सिलिटिस निम्त्याउन सक्छ, एपस्टीन-बार भाइरसको लागि जिम्मेवार उही भाइरस सहित, मोनोन्यूक्लियोसिस पनि हो।
तर, केहि ब्याक्टेरियाको कारणले हुन सक्छ - प्राय: स्ट्रेप्टोकोकस पायजेनेस (जसलाई ग्रुप ए स्ट्रेप पनि भनिन्छ) स्ट्रेप गला पछाडि उही अपराधी (स्ट्रेप्टोकोकल ग्रसनीशोथ) र, जब केही जनसंख्या, स्कार्लेट वा गठिया ज्वरोमा उपचार नगरी छोडियो।
टन्सिलिटिस एकदम संक्रामक हो, यसको मतलब तपाई यसलाई सजिलैसँग समात्नुहुनेछ। यो व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा नजिकको सम्पर्क, छींकने वा खोकीको माध्यमबाट पारित हुन्छ। जब कीटाणुहरूले संक्रमित व्यक्तिको शरीर छोड्दछन्, तिनीहरूले तपाईँको नाक र मुख प्रवेश गर्दछन्, र यदि रोग प्रतिरोधात्मक प्रणालीले उनीहरूको बिरूद्ध लडदैन भने बिमारी हुन सक्छ। यदि तपाईं बिरामी हुनुहुन्छ भने, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं अरूलाई संक्रमित हुनबाट जोगिन कदमहरू चाल्नुहोस् - जस्तै घरमै बस्नु, खोकी वा स्निज ढाक्न वा मास्क लगाउनु। वा, यदि तपाईलाई चिनेको कोही वर्तमानमा बिरामी छ भने, यो तपाईको टाढा राख्न चतुर छ।
टोन्सिलिटिसको सबैभन्दा सामान्य लक्षणहरू:
घाँटीमा लिम्फ नोडहरू फूलिएको छ
रातो र फूलेको घाँटी
निगल्न गाह्रो छ
१००..4 डिग्री फरेनहाइट भन्दा बढि ज्वरो
सम्भावित आवाज परिवर्तनहरू
यी अधिक गम्भीर लक्षणहरू एक तत्काल प्रदाता भ्रमण वारन्ट:
साना बच्चाहरूमा अत्यधिक drooling
टन्सिलिटिस जीवाणु वा भाइरल हुन सक्छ र दुबै दुखेको दुखाइ र ज्वरोको समान लक्षणहरूको साथ प्रस्तुत गर्न सकिन्छ; ब्याक्टेरिया टन्सिलिटिस प्राय: चाँडै बिग्रन्छ - विशेष गरी वयस्कहरूमा र गम्भीर पीडासँग सम्बन्धित हुन सक्छ, वर्णन गर्दछ जैकलिन जोन्स , MD, न्यूयोर्क शहरमा पार्क AE ENT मा एक otolaryngologist।
भाइरल वा ब्याक्टेरिया टन्सिलिटिसको लागि लक्षण, सहित स्ट्रेप घाँटी , समान छन् र जब दुई जोडिएका छन्, तिनीहरू ठ्याक्कै उस्तै समान छैनन्।
सम्बन्धित: कोरोनाभाइरस लक्षणहरूको तुलना गर्नुहोस्
टन्सिलिटिस निदान गर्दै
एक डाक्टर भेट तपाईंलाई एक निदान प्राप्त गर्न र तपाईं एक भाइरल घाँटी संक्रमण वा एक ब्याक्टेरिया मामला छ कि फरक छुट्याउन मद्दत गर्न सक्छ। केहि स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूले जीवाणुको टोनिलाइटिसबाट भाइरल छुट्याउन घाँटी संस्कृति प्रयोग गर्दछन्। त्यहाँ धेरै राम्रो प्रमाण छ कि तपाईंले ब्याक्टेरिया र भाइरल टन्सिलिटिसको बीचको भिन्नता लिन द्रुत स्ट्रेप टेस्ट वा घाँटी संस्कृति गर्नुपर्दैन यदि तपाईं क्लिनिकल उपकरण प्रयोग गर्नुहुन्छ भने सेन्टर मापदण्ड ।
cvs मा फ्लू शटहरु कति छन्
यदि स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरु द्रुत स्ट्रेप टेस्ट चलाउँछन्, तिनीहरूले अझै पनि प्रयोगशालामा परिणाम पठाउन सक्दछन् किनकि परीक्षणहरूको शुद्धता मात्र% ०% छ। यी संस्कृतिहरू टन्सिलमा सिधा घाँटी स्वाब मार्फत कब्जा गरिन्छ र केही क्षणको लागि असहज हुन सक्छ।
तीव्र टन्सिलिटिस: यदि तपाइँले अवसरमा टन्सिलिटिसको अनुभव गर्नुभयो भने, तपाइँको प्राथमिक हेरचाह प्रदायक वा एक तत्काल हेरचाह प्रदायकले तपाइँको अवस्थालाई गम्भीर रूपमा वर्णन गर्दछ।
जीर्ण टन्सिलिटिस: जब टन्सिलिटिस प्रायः भन्दा नसोधी हुन्छ, तपाईले कान, नाक, र घाँटी विशेषज्ञ (ईएनटी) को साथ हेरचाह गर्ने विचार गर्नुहुन्छ, जसलाई एक ओटोलेर्यांगोलोजिष्ट पनि भनिन्छ। दीर्घकालीन केसहरू सामान्यतया ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकसको कारणले हुन्छ, जसलाई स्ट्रेप ब्याक्टेरिया पनि भनिन्छ, र अक्सर भाइरल तीव्र घटना पछि देखा पर्दछ।
एक पटक मात्र टन्सिलिटिसको साथ व्यवहार गर्नु वा यो तपाईको जीवनको लगातार अंश बन्नु निराश हुन सक्छ किनकि घाँटी दुखाईको साथमा अन्य लक्षणहरूले तपाईको जीवनको गुणस्तरलाई असर गर्न सक्छ।
यदि तपाईं कार्य गर्न संघर्ष गरिरहनु भएको छ किनकि तपाईंको लक्षणहरू एकदमै गम्भीर छन्, तपाईंले आफ्नो प्रदायकलाई देख्नु पर्छ। यदि तपाईं माथि केहि मुद्दाहरू मात्र याद गर्नुभयो भने, घरेलू उपचार पर्याप्त राहत प्रदान गर्न सक्षम हुन सक्छ। धेरै अवस्थाहरूमा, तपाईले फेला पार्नुहुनेछ कि तपाइँ आफ्नो लक्षणहरूलाई एक तरीकाले कम गर्न सक्नुहुन्छ।
टन्सिलिटिसको लागि घरमा उपचार
हुनसक्छ तपाईसँग स्वास्थ्य बीमा छैन र तपाईले डाक्टरको बिल लिनबाट बच्न चाहानुहुन्छ, वा तपाई चाहानुहुन्छ एन्टिबायोटिक बिना रोगहरूको उपचार गर्नुहोस् जब तपाईं सक्नुहुन्छ। तपाईंको प्रेरणाले फरक पार्दैन, त्यहाँ टॉन्सिलाईटिसको लागि धेरै घरेलु उपचारहरू छन्। टन्सिलिटिसका धेरैजसो केसहरू आफैंमा कम हुने भएकोले उपचारको मुख्य फोकस केहि लक्षणहरूसँग सम्बन्धित असुविधा कम गर्ने र हाइड्रेटेड रहनु हो।
के यो टायलेनोल र एडविल सँगै लिन ठीक छ
अति-काउन्टर उपचार र जीवनशैली परिवर्तनहरूले मद्दत गर्न सक्दछ:
पीडा र ज्वरो कम गर्न एसिटामिनोफेन वा आईबुप्रोफेन लिनुहोस्
स्पष्ट तरल पदार्थहरू पिउँनुहोस् वा बरफ वा पपसिलहरूमा चूस्नुहोस्
घाँटी lozenges मा चिया
नुन पानी संग गार्गल
एक रात को एक humidifier संग ओछ्यानमा तपाईंको ओछ्यान कोठा राख्नुहोस्
यदि भाइरसले तपाइँको टोनिलाइटिस निम्त्याइरहेको छ भने, कुनै पर्सनपिक्सनले मद्दत गर्दैन। यदि तपाईंको संक्रमण जीवाणु छ भने, तपाईंलाई लक्षणहरू निको पार्न एन्टिबायोटिक उपचार आवश्यक पर्न सक्छ। यस अवस्थाको उपचार गर्नको लागि प्रयोग गरिने सबै भन्दा साधारण औषधी हो पेनिसिलिन , तर ठूला बच्चाहरू, किशोर, र वयस्कहरूको लागि पनि ब्याक्टेरियाको टोन्सिलिटिसले एन्टिबायोटिक बिना समाधान गर्न सक्छ।
तपाईको जीवनको गुणस्तरलाई असर गर्ने टन्सिलको संक्रमित संक्रमणका लागि तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले तपाईलाई ईएनटी विशेषज्ञ भेट्न सिफारिस गर्न सक्छ।
बारम्बार टोन्सिलिटिसका बिरामीहरूले टॉन्सिलकोटमी वा टन्सिलको शल्य हटाउने कुरामा ध्यान दिन सक्दछन्। सामान्यतया, हामी टोन्सिललेक्टोमीको सिफारिस गर्छौं यदि कसैले एक वर्षमा सातवटा एपिसोडहरू अनुभव गर्दछ भने, लगातार दुई वर्षको लागि प्रति वर्ष पाँच भाग भन्दा बढी वा लगातार तीन वर्षको लागि प्रत्येक वर्ष कम्तिमा तीन एपिसोड, ओमिद मेहदीजादेह , MD, otolaryngologist र laryngologist प्रोविडेन्ट सेन्ट जोनको स्वास्थ्य केन्द्र सान्ता मोनिका, CA मा। अन्य कारकहरू निल्न गाह्रो, सास फेर्न कठिनाई, वा एक peritonsillar फोडा को घटना सहित विचार गर्न सकिन्छ।
शल्य चिकित्सा कडा कदम जस्तो लाग्न सक्छ; यद्यपि, यदि तपाईंको टोन्सिलिटिसले अवरोधात्मक निद्रा एपनिया वा अन्य गम्भीर स्वास्थ्य समस्याहरूमा योगदान पुर्‍याइरहेको छ भने, यो त्यस्तो कुरा हो जुन तपाईं विचार गर्न चाहानु सक्नुहुन्छ। एक विश्वसनीय ईएनटीले यो सिफारिश गर्न सक्छ, र धेरै केसमा, अन्य सबै उपचार विधिहरू असफल भएपछि शल्य विकल्पहरू अन्तिम उपाय हो।
केहीको लागि, टोन्सिलिटिस एक सामयिक मुद्दा हो जुन एक व्यक्तिको जीवनको एक हप्ताको बारेमा असर गर्न सक्दछ, जबकि अन्यहरू यसको निरन्तर आधारमा संघर्ष गर्दछन्। यदि तपाईंसँग धेरै सामान्य लक्षणहरू छन् जो टॉन्सिलाईटिससँग सम्बन्धित छ भने, तपाईंलाई सकेसम्म चाँडो डाक्टरलाई भेट्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईको भेटघाट नभएसम्म लक्षणहरू कम गर्न केहि घरेलु उपचारहरू प्रयोग गर्ने बारे विचार गर्नुहोस्, र निश्चित गर्नुहोस् कि उपचारको योजना विकास गर्न तपाईको चिकित्सकसँग मिलेर काम गर्नुहोस् जुन तपाईंको आवश्यकताको लागि उत्तम कार्य गर्दछ।
Tamiflu खुराक, फारम, र शक्तिहरू
Crestor vs. Lipitor: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
यो राम्रो छ राती एलर्जी meds लिन
कुन उमेर मा एलर्जी परीक्षण गर्न सकिन्छ
कस्तो प्रकारको डाक्टर म स्तंभन रोग को लागी देख्छु?
के तपाइँ मिरालक्स र डुलकोलक्स सँगै लिन सक्नुहुन्छ
कोलास लिन को लागी सबैभन्दा राम्रो समय हो
तपाइँ एकै समयमा एडविल र tylenol दिन सक्नुहुन्छ
जब diflucan लिन को लागी सबै भन्दा राम्रो समय हो